Khabiirka Kala Duwan: Muhiimadda Shakhsiga SEO ee Guusha Xirfadda
SEO ma shaqeeyo oo kaliya hay'adaha shirkadaha laakiin sidoo kale shaqsiyaadka. Caadiyan,naqshadeynta raadinta raadinta waxay diiradda saareysaa samaynta bogga bogga waxayna u muuqataa natiijooyinka raadinta raadinta ku salaysan shuruudaha khuseeya. SEO SEOSidoo kale waxay hoos u dhigtaa magaca qofka. Dhaqaalaha khayaalka ah ee maanta, waxaa jira baahi sii kordheysa oo loo abuurayo internetka shakhsiyeedmuuqaalka iyo ilaalinta muuqaalka dadweynaha ee wanaagsan oo ku saabsan mihnadlaha iyo bulshada internetka.
Sida ku cad jaangooyada Google, mashiinka raadinta ayaa ka shaqeeyay ilaa 2 trillion baaritaansannadka 2016 oo kali ah - fairys fortune slot machine download. Inkastoo aynaan xisaabin karin inta boqolkiiba ay ku socotay cilmi-baaris shakhsiyeed, waxa si wayn loo aqbalay in ay jirtoha ahaado wax wanaagsan oo ku saabsan natiijooyinka raadinta raadinta. Mawduucan wanaagsan waa inuu ka tarjumaa labada gooboodba sida LinkedIniyo sidoo kale goobaha warbaahinta bulshada sida Facebook iyo Twitter.
khabiirkii ugu horreeyay ee Sare Adeegyada Digital, Ivan Konovalov, ayaa muujinaya qaar ka mid ah siraha SEO-ga gaar ahaaneed.
Erayada waxay u adeegsadaan aasaaska SEO. SEO-ga gaarka ah, magacaagu waa adigaereyo muhiim ah. Kuwa qoraayo waxay ku tiirsan yihiin raadinta Google si ay u sameeyaan raadinta asalka ah ee shaqaalaha laga yaabo..
Sidaa darteed, haddii aad raadsato aragti shakhsiyeed online, waxaad u baahan tahay marka hore inaad abuurto aAqoonsiga internetka ee buuxiya magaca rasmiga ah ama magaca gaarka ah ee aad rabto inaad isticmaasho internetka. Magacani wuxuu noqonayaa ereygaada muhiimka ah waana in la isticmaalosi joogta ah oo loogu talagalay dhammaan shabakadaha internetka oo la ilaaliyo mar walba. Joogitaanka noocan oo kale ah waxay u oggolaanayaan in raadiyeyaashu ay kuu aqoonsadaan dhamaanba suurtogalkanatiijooyinka raadinta gaar ahaan natiijooyinka raadinta isku midka ah. Waxa kale oo ay qofka siinaysaa kalsoonida oo u sahlaysa dadka kale inay la xiriiraanoo waxaad ku xiran kartaa internetka.
Qaar ka mid ah codsadayaasha shaqo doonka ah, tusaale ahaan, fududee cilmi-baarista asalka ah ee qoristaka shaqeeyaan cinwaanadooda internetka ee shabakadaha sida LinkedIn, Twitter, Facebook, iyo Google. Tani waxay hubisaa xisaabtarkoodasi sahlan loo aqoonsan karo loona heli karo. Shirkad qorista shirkadu uma baahnid wakhti badan wakhti baadhitaankii hore, way fududahay in la heloshaqsiyaadkaaga internetka ayaa si fiican u shaqeeya. Sidaa awgeed, waa in ay helaan waxyaabo kugu saabsan, natiijooyin madhan waxay keenaan fikradaha xun.
Korjoogteynta Aqoonsiga Iskoolajiga ah
U qaado qorshe si aad ula socoto sumcadaada internetka sanadka oo dhanmarxalad ahaan. Sidan ayaad ku sii socon kartaa waxa ay dadku ku yiraahdaan adiga ama hawlaha nooca adiga kugu xiran. Tani waa difaacMashruuca loogu talagalay in lagu xakameeyo. Haddii aad ka heshid waxyaabaha aan lagaa rabin ee ku saabsan internetka, waxaad qaadi kartaa tallaabooyin aad ku sameysid shakhsi ahaanWaxyaabaha SEO-ga ah ee ka tarjumaya hamigaaga iyo himiladaada xirfadeed iyo guulahaaga. Sidan ayaad mar walba ka hor intaadan raadin dooninraadinta daraasad taariikheed oo ku saabsan shakhsigaada.
SEO-ga shakhsi ahaaneed waa shardi u ah xirfadlaha qarniga 21-aad. Sirtabeen ka ah isticmaalka joogtada ah ee erayga muhiimka ah ee magaca iyo kormeerka sumcadda internetka inta aad soo saareyso wax tayo leh oo ku saabsan naftaada.Ka fogow dhamaan baaritaanada asalka ah ee kugu saabsan.